तीन दिनमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकबाट २ सय ६० आइसियू बेड गायब! :: विवेक राई :: Setopati
तीन दिनमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकबाट २ सय ६० आइसियू बेड गायब!
गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभर एक हजार १५८ आइसियू बेड रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्‍यो। जसमा प्रदेश १ मा ११०, प्रदेश २ मा ४८, बागमतीमा ५५६, गण्डकीमा २३६, लुम्बिनीमा ११७, कर्णालीमा ६२ र सुदूरपश्चिममा २९ बेड रहेको उल्लेख थियो।
मंगलबार प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकमा आइसियू बेड थपिएर एक हजार १६२ पुग्यो। तर बुधबार मन्त्रालयले देशभर जम्मा ८ सय ९८ वटा मात्र आइसियू बेड रहेको अर्को तथ्यांक प्रस्तुत गर्यो। जसमा प्रदेश १ मा ११०, प्रदेश २ मा ४८, बागमतीमा ५५६, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा ८५, कर्णालीमा ६२ र सुदूरपश्चिममा २९ बेड छन्।
यसरी तीन दिनमै सरकारी आँकडाबाटै २ सय ६० आइसियू बेड गायब छ। तथ्यांक अनुसार गण्डकी र लुम्बिनीमा आइसियू बेड संख्या गलत रहेको देखिन्छ।
गत सोमबार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनीमा १ सय १७ वटा आइसियू बेड रहेकोमा बुधबार जम्मा ८५ वटा आइसियू बेड रहेको उल्लेख छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका सूचना अधिकारी नेत्रलाल अर्यालले प्रदेशभर आइसियू बेड संख्या ८५ नै रहेको बताए।
'हामीसँग प्रदेशभर गरेर आइसियू बेड ८४, एचडियू बेड ८९ र भेन्टिलेटर ४० वटा छ,' उनले भने।
यस्तै सोमबारकै मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गण्डकीमा २ सय ३६ आइसियू बेड रहेकोमा बुधबार जम्मा ८ वटा आइसियू रहेको उल्लेख छ।
पोखरा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले भने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको तथ्यांक झुक्किएर गलत भएको हुनसक्ने बताए।
उनले गण्डकीमा कम्तीमा २ सय ३१ वटा बढी आइसियू बेड रहेको जनाए। तर मन्त्रालयले पेश गरेको तथ्यांकमा प्रदेशभर जम्मा आठ वटा आइसियू बेड रहेको उल्लेख छ।
'त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो। त्यो गलत हो। हामीसँग २ सय ३१ बढी आइसियू बेड छन्,' निर्देशक शर्माले भने।
मन्त्रालयले गलत आइसियू बेड संख्या प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हैन।
गएको कत्तिक ४ गते निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले देशभर २ हजार ६ सय आइसियू बेड रहेको बताएका थिए। साथै ४ सय बेड थप्ने तयारी रहेको जनाएका थिए। तर अहिले नयाँ आइसियू थप्ने कुरा त परै होस्, उल्लेख गरिएको बेड संख्याभन्दा आधा छ।
चिकित्सकहरूका अनुसार गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितको उपचारमा आइसियू महत्वपूर्ण मानिन्छ।
पछिल्लो समय कोरोनाको नयाँ प्रकार (भेरियन्ट) फैलिरहेको छ। यसले अस्पताल भर्ना हुने संक्रमित बढ्ने हुँदा भएका आइसियूहरूले नपुग्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले भने आइसियू बेड विस्तार गर्ने कुरामा कुनै तदारूकता देखाएको छैन। भएकाहरूमा समेत पर्याप्त जनशक्ति खटाउन सकेको छैन। यसअघि संक्रमणको पहिलो लहरमा पनि काठमाडौंसहित ठूल्ठूला सहरमा आइसियू चाहिने संक्रमितलाई बेड अभाव भएको थियो। फेरि पनि त्यो अवस्था आउनसक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २, २०७८, ०२:५८:००